के खानेकुराले तपाईको शा*रिरीक सु*खभोग सु*धार्न सक्छ ? - Darpanpost
» समाज अंक: 23573
के खानेकुराले तपाईको शा*रिरीक सु*खभोग सु*धार्न सक्छ ?
बीबीसी । कतिपय मानिस सही खानेकुराले उनीहरूलाई बढ्ता राम्रो प्रेमी बनाइदिने विश्वास गर्छन् । यदि कुनै एउटा खास खानेकुराले मानिसको शारिरीक सुखभोगको क्षमता वा शारिरीक सुखभोगको आनन्द बढाइदिने प्रमाण फेला परेमा त्यो हातहातै विक्री हुन्थ्यो होला।
सन्तुलित खानपान, सक्रिय जीवनशैली तथा सही मानसिक स्वास्थ्यले तपाइँको शारिरीक सुखभोग राम्रो बनाइदिन सक्छन्। तर के कुनै खास खानेकुरा छन् जो प्राकृतिक रूपमै शारिरीक सुखभोग बढाईदिने छन् । जुन खानाले मनमा खुसीयाली उत्पन्न गराउने इन्डर्फिन तत्व शरीरमा उत्पादन गराउँछ तिनमा वास्तवमा स्वस्थ शारिरीक सुखभोगको इच्छासँग सम्बन्धित तत्व पनि हुन्छन्।
तिनलाई बरोबर शारिरीक सुखभोगको क्षमता बढाउने रूपमा समेत प्रस्तुत गरिन्छ। यस्ता दाबीका पछाडि रहेका इतिहास तथा विज्ञान एकपटक जानौँ। के कुनै विशेष खाना छ जसले शारिरीक सुखभोग सुधारिदिन्छ रु
शायद इतिहासकै सबभन्दा प्रख्यात प्रेमी क्यासानोभाले बिहानी नास्तामा ५० वटा ओयस्टर खान्थे भनिन्छ। तर ओयस्टर सेवन र शारिरीक सुखभोगको बारे कुनै प्रमाणित सम्बन्ध पाइँदैन। त्यसोभए यो हल्ला कहाँबाट चल्यो त रु
ओयस्टर शारिरीक सुखभोगको क्षमता बृद्धि गर्ने रूपमा ठानिनुलाई ग्रीक किम्वदन्तीमा प्रेमकी देवी एफ्रोडाइटको उत्पत्ति समुन्द्रमा भएकोसँग जोडेर हेरिन्छ , किम्वदन्ती अनुसार ग्रीक प्रेमकी देवी एफ्रोडाइटको उत्पत्ति सेतो फिँजबाट भएको थियो र उनी समुन्द्रबाट निस्किएकी थिइन्। त्यसैले समुन्द्री खानेकुरा शारिरीक सुखभोगको बृद्धि गर्ने मानिन्छन्। तर जे होस् ओयस्टर खान रुचाउनेहरूका लागि खुसीको खबर के छ भने यी महँगा मोलस्क जातीका प्राणीहरूमा प्रशस्त जींक तत्व पाइन्छ जुन् टे स्टो स्टेरोन उत्पादनमा अत्यावश्यक हुन्छन्।
साथै अनुसन्धानहरूका अनुसार जीकले शारिरीक सुखभोगको उच्चता बृद्धिको उपचार गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ भन्ने देखाएका छन्। जींकका अन्य स्रोतहरूमा शेलफिस, रातो मासु, बियाँ ९उदाहरणका लागि फर्सीको बियाँ वा तील०, काजु, हाडे बदाम, चना, राजमा, दूध तथा चीज पर्छन्।
अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार डार्क चकलेट खाँदा प्रेममा परेको जस्तै किसिमको आनन्द अनुभव हुन्छ किनकि त्यसमा प्रेम रसायन फिनाइलइथाइलामाइन ९पीइए० हुन्छ। कसैसँग प्रेमसम्बन्धमा पर्दाका सुरुवाती समयमा सञ्चार हुने पीइएले शरीरमा आनन्द अनुभव गराउने डोपा माइन नामक हर्मोन पनि निष्कासन गराउँछ। साथै, मस्तिष्कको आनन्दसम्बन्धी केन्द्रलाई पनि यसले सक्रिय बनाउँछ।
तर चकलेटमा निकै कम मात्रामा मात्र पीइए हुन्छ। को कामा ट्रिप्टोफान नामक एमिनो एसिड पनि हुन्छ जसले रक्तसञ्चार तथा सेरोटोनीनको ९आनन्दको अनुभूतिसँग जोडिएको अर्को हर्मोन० स्तर बढाइदिन्छ।
वैज्ञानिकहरू भन्छन् डार्क चकलेट खाँदा प्रेममा परेको जस्तै किसिमको आनन्द अनुभव हुन्छ । त्यसोभए कहिलेदेखि चकलेट र शारिरीक सुखभोगकोबीचको सम्बन्ध गाँसियो रु शायद १६ औँ शताब्दीतिर हुनुपर्छ। हेर्नान कोर्टेस १६ शताब्दीका एक स्पेनी कंक्विस्टेडर ९अमेरिकी महादेशका भूभाग कब्जा गर्न खटाइएका ल डाकू० थिए जो माया तथा एज्टेक साम्राज्यहरूमा पुगे।
हाल मेक्सिको रहेको सम्पूर्ण जसो भूभाग कब्जा गरेर उनले क्यास्टिल साम्राज्यको अधिनमा ल्याए। चकलेटको सम्पर्कमा आउने पहिलो युरोपेली उनै भएको ठानिन्छ। उनले स्पेनका राजालाई लेखेको पत्रमा आफूले स्थानीय माया समुदायका मानिसहरूले को काको झोल खाने गरेको देखेको र त्यसले प्रतिरोध क्षमता बढाइदिने र थकान हटाउने उल्लेख गरेका छन्।
तर निश्चित रूपमै चकलेटको प्रयोग शारिरीक सुखभोग बृद्धिको ओखतीको रूपमा भएको प्रमाण भने छैन। ट्रिप्टोफानका अन्य स्रोतहरू सालमन माछा, अण्डा, कुखुरा, पालुङ्गोको साग, बियाँ, काजुकिसमिस तथा भटमास भएको मानिन्छ ।
खुर्सानीले शरीरभित्रका अत्यावश्यक रासायनिक क्रियाको गति एवं मुटुको चाल बढाइदिन्छ । के खुर्सानीले तपाइँको शारिरीक सुखभोगको जीवन रङ्गिन बनाउँछ रु पिरो खुर्सानीमा क्याप्साइसीन हुन्छ जसले इन्डर्फिन तत्व ९उही आनन्द अनुभूति गराउने तत्व० को निष्कासन सक्रिय पार्छ। खुर्सानीले शरीरभित्रका अत्यावश्यक रासायनिक क्रियाको गति एवं शरीरको तापक्रम र मुटुको चाल बढाइदिन्छ।शारिरीक सुखभोगको बेला पनि त्यस्तै हुन्छ।
शारिरीक सुखभोगका विज्ञ डाक्टर क्रिचमान भन्छन् मानिसहरूले शारिरीक सुखभोग बृद्धि गर्ने भनेर खान्छन् किनभने उनीहरूले त्यसले काम गर्छ भनेर विश्वास गर्छन्। र, यदि कसैमा केहीले काम गर्‍यो भने त्यसमा कारण किन खोजिरहनु रु शारिरीक सुखभोग बृद्धिको रूपमा परिचित कैयौँ खानेकुरा वास्तवमै स्वस्थ खानेकुरा हुन्। तर कुनै बिरुवाबाट निकालिएको वा कुनै वस्तुबारे स्वास्थसुरक्षाको आँकडा प्राप्त छैन भने तिनबाट जोगिनु नै बेस हुनेछ। चामत्कारिक ओखती भनेर दाबी गरिएका चीजबाट पनि टाढै रहनु राम्रो।
यदि तपाइँमा शारिरीक सुखभोगको इच्छामा कमी छ भने सम्भवतः तपाइँमा अन्य स्वास्थ्य समस्या भएको हुन सक्छ। यसबारे चिकित्सकसँग परामर्श लिनु जाती हुनेछ।